Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Health Q and A 9-9-2013
Health Q and A 9-9-2013
Sun, Sep 8, 2013 at 9:54 PM
HPV ရှိမရှိက်ို ကျား/မ နှစ်ဦးလုံးစစ်လို့ရပါသလားဆရာ။ ရတယ်ဆို ဘယ်လိုပြောစစ်ရလဲ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။
• သားအိမ်ဝကင်ဆာအတွက် စစ်ဆေးနည်းဖြစ်တယ်။ လိင်လမ်းရေယုံနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်။
• Pap smear စမ်းနည်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ်တယ်။
• HPV DNA tests အဲဒီနည်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေ့ရင် ဒီနည်းဆက်စစ်မယ်။
• အသက် ၃ဝ-၆၅ နှစ်အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒီ ၂ နည်းကိုတွဲလုပ်တယ်။ ၅ နှစ်တခါစစ်သင့်တယ်။
• အသက် ၃ဝ အောက်အမျိုးသမီးတွေကို ဆန်ကာတင်စစ်နည်းအနေနဲ့ မသုံးပါ။ စစ်ရင်လဲ တွေ့မဲ့သူကများပြီး၊ အလိုလိုလဲပျောက်နိုင်တယ်။
• digene HPV Test နည်းကို အမေရိကားမှာသုံးတယ်။
Sat, Sep 7, 2013 at 3:41 PM
ကျွန်တော် ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသိတာရှိလို့မေးပါရစေခင်ဗျာ။
1. CAMENTO ABLET
2. BLUECAP (Dextromehorphan HBr, Terpin hydrat)
3. CLARITHROMYCIN TABLETS USP 250 MG
4. TRILOCK (Montelukast 5mg)
အဲ့ဒီ ဆေးတွေ က ဘာအတွက်သောက်ရတာလဲ ဆရာ။ အဲ့ဒီ ဆေးတွေ မှာ ဘယ်လိုအကျိုးအာနိတင် ရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီ ဆေးတွေမှာ ဘယ်လို Side Effects တွေရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ။
အဲ့ဒါတွေ သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
CLARITHROMYCIN က ပိုး (ဗက်တီးရီးယား) တွေကိုနိုင်တဲ့ဆေး၊
Dextromehorphan HBr က ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊
Montelukast က ပန်းနာ (လေပြွန်ကျဉ်း) အတွက်ဆေး၊
Clarithromycin ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
ဝမ်းပျက်၊ အိပ်ချင်၊ ပျို့၊ ဗိုက်နာ၊ အန်၊ မျက်နှာဖေါ၊ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်တို၊ သူများမမြင်မကြားတာ မြင်ကြား၊ အရသာပျက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊
Montelukast ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
ဗိုက်အောင့်၊ နှာခေါင်းသွေးယို၊ တုပ်ကွေးမိသလိုခံစား၊ ချွေးထွက်၊ ရင်ကြပ်၊ အားယုတ်။ စိုးရိမ်၊ စိတ်တို၊ ဝမ်းချုပ်၊
Dextromethorphan ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
ယား၊ ပျို့၊ ခေါင်းမူး၊ အိပ်ချင်၊ မျက်စိမှိတ်ထာရင် သူများမမြင်တာကိုမြင်နေ၊ အသက်ရှူရခက်၊
ဆေးများလာရင် သူများမမြင်တာကိုမြင်နေ၊ အန်၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ မျက်စိနီရဲ၊ ချွေးထွက်၊ ကိုယ်ပူ၊ သွေးဖိအားကျ၊ နှလုံးခုန်မြန်၊ ဝမ်းပျက်၊ အိပ်ချင်၊ ကောင်းတာတွေထင်မြင်၊ မျက်စိကမစူးစိုက်နိုင်၊
Sat, Sep 7, 2013 at 4:16 PM
ကျွန်‌‌တော်ဟာ သ‌င်္ဘော‌‌‌ပေါ်မှာ ဦး‌ခေါင်းကိုအက်ဆီဒန့်ခိုက်မိပြီး UAE နိုင်ငံမှာ ခွဲစိပ်ပြီး‌လေ ညာဖက်အခြမ်းဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်‌‌တော် အခု ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ဒီစာကို ‌ရေး‌နေတာပါ။ ကျွန်‌‌တော်သိချင်တာက ဘယ်အချိန်‌‌လောက်‌ ပြန်‌‌ကောင်းနိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုစား‌သောက်‌ ‌နေထိုင်ရပါမလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဆေားရီး။ ပွင့်ပွင့်လင်လင်းပြောပါရစေ။ လေဖြတ်တယ်ဆိုတာ အာရုံကြော ထိခိုက်-ပျက်စီးရာကနေဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောမှန်သမျှ ချက်ချင်းပြန်မကောင်းတာမျိုးက နောင်လဲ ပြန်မကောင်းပါ။ အသစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စွမ်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးပြီးသားနေရာက သက်သာယုံသာ သက်သာနိုင်တယ်။
ဆောရီး။ ကံတရားကိုတော့ အားကိုးပါ။ စိတ်ကိုလဲ ပြင်ဆင်ပါ။ အပြုသဘောဆောင်ထားရင် အကျိုးများပါတယ်။
Sun, Sep 8, 2013 at 10:27 AM
လက်ထပ်ပြီးတစ်ခါပဲ သုံးလခံ တားဆေးထိုးဖူးတာပါ။ ကလေးလိုချင်လို့ ဆေးဖြတ်ထားတာ ၃ လရှိပါပြီ။ ရာသီလည်း ပြန်မပေါ်သေးပါဘူး။ ကြားထဲမှာ တစ်ခါ ရာသီပေါ်ဆေး၂ ရက်ဆက်တိုက်တစ်ခါ ထိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီမပေါ်ဘူး။ ကလေးလိုချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆရာမရယ်။ သောက်ဆေးလေးများရှိရင်ညွှန်ပေးပါနော်။ ဘယ်လို အစားအသောက်တွေ စားပြီး ဘာတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာလည်း ပြောပြပေးပါ။ အိုဂျီ ပြဖို့ ရောလိုအပ်ပါသလား။
လင့်ခ်ပေးတဲ့စာတွေကို သိလိုတာရွေးဖတ်ပါ။ သိချင်သေးရင် တိတိကျကျ ပြန်မေးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာမတော့ မဟုတ်ပါ။
Infertility news သားသမီး မရနိုင်သေးသူတွေအတွက် စိတ်မပျက်နဲ့ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/02/blog-post.html
Infertility news သားသမီးမရနိုင်သေးခြင်း သတင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/08/infertility-news.html
Infertility Question ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း မေးခွန်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/09/infertility-wuestion_1.html
Sat, Sep 7, 2013 at 4:32 PM
ဆေးဝါးတစ်မျိုးကို ရေရှည်စွဲစားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရေရှည်ဆိုတဲ့ကာလက ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ လပိုင်းလား နှစ်ပိုင်းလားခင်ဗျာ။ Moriamin Forte ကို ရေရှည်စားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆေးကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ခံစားရမှာ စိုးလို့ပါခင်ဗျာ။ ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုထိ ခြားခြားပြီးစားရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကာကွယ်နိူင်မလားခင်ဗျာ။ လမ်းညွှန်ပေးပါခင်ဗျာ။
မိုရီယာမင်ဆေးထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ (အမိုင်နိုအက်စစ်) တွေပါတယ်။ ပရိုတင်းမလုံလောက်သူတွေ၊ ပိုလိုချင်သူတွေကိုပေးတယ်။ ဥပမာ အသက်ကြီးသူတွေ၊ အိပ်ယာထဲလူမမာတာရှည်ဖြစ်နေသူတွေ၊ ပါးစပ်ကအစာကောင်းကောင်းမစာနိုင်သူတွေကိုပေးတယ်။ မလိုဘဲသောက်ရင် ကိုယ်ကနေစွန့်ထုတ်ပြစ်ပါမယ်။
ဗီတာမင်တွေလိုတော့ များသွားလို့ ဘေးမဖြစ်စေပါ။ ဒါက ယေဘုယျပြောတာဖြစ်တယ်။ တဦးချင်းအခြေအနေလိုက်ပြီး ပရိုတင်းမများသင့်သူမျိုးဆိုရင် မကောင်းစေပါ။
လူနာ ကျား-မ၊ အသက်၊ ရောဂါသိရမှသာ ပိုတိကျတာပြောနိုင်မယ်။